Dr. Faroole: Ma ogolin xiisadda Sool
Madaxweyne Faroole ayaa shir jaraa'id oo uu ku qabtay Garowe kaga hadlay arrimaha burcadbadeedda iyo xiisado dagaal oo ka aloosnaa gobolka Sool
Madaxweynaha maamulka Puntland Dr. C/raxmaan Maxamed Maxamuud Faroole oo saxaafadda kula hadlay magaalada Garowe ayuu wuxuu ka hadlay arrimaha burcadbadeeda iyo xiisado dagaal oo todobaadyadii la soo dhaafay ka aloosnaa degaano ka tirsan gobolka Sool.
Madaxewyne Faroole ayaa sheegay in maamulkiisu uu dagaal kula jiro burcadbadeedda taasoo marqaati u ah ayuu yiri in Puntland ay ku xir-xiran yihiin burcadbadeeddii ugu tirada badnedy marka la eego guud ahaan caalamka.
Dr. Faroole ayaa sheegay in maamulkiisu uu aad uga xun yahay in beesha caalamku aanay gacan ka siineyn dagaalka ay kula jiraan burcadbadeeda.
Dr. Faroole, Wuxuu sheegay in ciidamada Puntland ay awood u leeyihiin inay la dagaalamaan burcadbadeeda, isagoo tusaale ahaan u soo qaatay saddex markab oo uu sheegay in laga afduubtay ganacsato Soomaaliyeed kuwaasoo u kala socday dekedaha Puntland iyo Soomaaliland, hase yeeshee ay ciidamada Puntland ay xoog ku soo furteen maraakiibtaasi.
Wuxuu kaloo sheegay in maamulkiisu uusan soo dhoweyneyn in madaxfurasho la siiyo burcadbadeedda, hase yeeshee uu ku eedeeyay bixinta madaxfurashada inay oggol yihiin shirkadaha maraakiibta iska leh iyo qoysaska la haystayaasha.
Dhanka kale madaxweynaha Puntland Dr. C/raxmaan Maxamed Maxamuud (Faroole) ayaa ka hadlay xiisaddo dagaalleed oo toddobaadyadii u dambeeyay ka dhacayay deegaano ka tirsan gobolka Sool.
Madaxweyne Faroole ayaa ku eedeeyay issimo uusan magacaabin iyo siyaasiyiin xilal ka soo qabtay Puntland iyo dowladdihii dhexe ee Soomaaliya inay dabada ka riixayaan dagaal jabhadeed oo aan meelna lagu gaarayn, wuxuuna sheegay in arrintaasi ay sharci darro tahay maamulkiisuna uusan oggoleyn in xasilooni darro la abuuro.
Wuxuu sheegay in maamulkiisu uu xil ka saaran yahay sidii Laascaanood loogu soo celin lahaa gacanta Puntland oo ay ka baxday dabayaaqadii 2007.
Warbixinta Dr. Faroole